Vaovao - inona avy ireo singa ao amin'ny tontonana masoandro
Voalohany indrindra, andeha hojerentsika ny kisarisary amin'ireo panneaux solaires.
Ny sosona afovoany dia ny sela solar, izy ireo no lakilen'ny singa sy fototra ao amin'ny tontolon'ny masoandro. Betsaka ny karazana sela solar, raha miresaka amin'ny fahitana ny habeny isika dia hahita haben'ny sela lehibe telo eo amin'ny tsena ankehitriny: 156.75mm, 158.75mm, ary 166mm. Ny haben'ny sela solar sy ny isa dia mamaritra ny haben'ny tontonana, ny lehibe kokoa sy ny haben'ny sela, ny habean'ny tontonana. Manify dia marefo ny sela ary mora vaky, izany no antony iray hanangonana ny sela amin'ny takelaka, ny antony hafa dia satria ny sela tsirairay dia tsy afaka mamorona antsasaky ny volt fotsiny, izay tena lavitra ny ilaintsika mba hampandehanana fitaovana, ka raha te hahazo herinaratra bebe kokoa, tariby tariby ireo sela, avy eo atambatra ao anaty takelaka ireo tadiny. Etsy an-danin'izany, misy karazany roa ny sela silika amin'ny masoandro: monocrystallian sy polycrystallian. Amin'ny ankapobeny, ny tahan'ny tahan'ny fahombiazan'ny sela poly dia 18% ka hatramin'ny 20%; ary ny sela mono dia 20% ka hatramin'ny 22%, mba hahafahanao miteny ireo sela mono mitondra fahombiazana avo kokoa noho ny sela poly, ary mitovy amin'ny takelaka. Mazava ho azy koa fa handoa vola bebe kokoa ianao amin'ny fahombiazana avo kokoa izay midika fa lafo kokoa ny tontolon'ny masoandro mono noho ny tontolon'ny masoandro.
Ny singa faharoa dia ny sarimihetsika EVA izay malefaka, mangarahara ary mifikitra tsara. Izy io dia miaro ny sela amin'ny masoandro ary mampitombo ny rano atin'ny sela sy ny fahaizany manohitra ny harafoana. Ny sarimihetsika EVA mendrika dia maharitra sy lavorary amin'ny laminating.
Ny singa manan-danja hafa dia ny vera. Raha ampitahaina amin'ny fitaratra mahazatra, ny fitaratra amin'ny masoandro dia ilay nantsoinay hoe vera mazava sy ambany. Toa fotsy kely izy, voaravaka eo amboniny mba hampiakarana ny tahan'ny fandefasana izay mihoatra ny 91%. Ny fihenan'ny vy ambany dia mampiakatra ny tanjaka ary mampitombo ny fahaizan'ny mekanika sy ny fanoherana ny panneaux solaires. Matetika ny hatevin'ny vera masoandro dia 3.2mm sy 4mm. Ny ankabeazan'ny haben'ny sela matetika dia sela 60 sy sela 72 manana vera 3.2mm, ary ny takelaka lehibe toa ny sela 96 dia mampiasa vera 4mm.
Ny karazana takelaka afara dia mety ho maro, TPT dia ampiharin'ny ankamaroan'ny mpanamboatra ho an'ny tontolon'ny masoandro silika. Matetika ny TPT dia fotsy hampitomboana ny tahan'ny taratra ary hampihena kely ny maripana, fa amin'izao fotoana izao dia maro ny mpanjifa no maniry ny mainty na ny loko mba hahazo endrika hafa.
Ny anarana feno ho an'ny frame dia anodized aluminium alloy frame, ny antony lehibe mahatonga anay manampy frame dia ny fampitomboana ny fahaizan'ny mekanika panneaux solaire, noho izany manampy amin'ny fametrahana sy fitaterana. Rehefa avy nanampy fefy sy vera dia lasa henjana sy maharitra mandritra ny 25 taona ny tontolon'ny masoandro.
Farany fa tsy farany, boaty fihaonana. Ny tontonana tara-pahazavana rehetra dia misy boaty fihaonana ahitana boaty, tariby ary mpampitohy. Raha ny tontonana kely na namboarina manokana dia mety tsy ho tafiditra ao avokoa. Misy ny olona maniry ny clip noho ny connectors, ary ny sasany maniry ny tariby lava na fohy kokoa. Ny boaty fihaonambe mendrika dia tokony hanana diode hialana amin'ny toerana mafana sy faritra fohy. Ny haavon'ny IP dia aseho eo amin'ny boaty, ohatra, IP68, dia manondro fa manana fahaizany mahatohitra rano mahery izy ary mamela azy hijaly amin'ny orana maharitra.